I-Ramales phakathi komlambo kunye neentaba-indawo yokupaka kunye ne-wifi yamahhala - I-Airbnb
I-Ramales phakathi komlambo kunye neentaba-indawo yokupaka kunye ne-wifi yamahhala
Ucoceko, utshintsho lwesofa yebhedi kwigumbi ngalinye elitsha. Igaraji evaliweyo kunye nokufikelela ngokuthe ngqo kwindlu. WiFi yasimahla. Indlu enefenitshala ngokupheleleyo. Amashiti kunye neetawuli zibandakanyiwe. Ukuphumla okufanelekileyo, ukuhamba, ukuzonwabisa kunye nenkcubeko, imiqolomba, iibhafu zomlambo, i-barbecue. Imizuzu eyi-15 ukusuka elunxwemeni lwaseLaredo. Igumbi elinebhedi ephindwe kabini kunye nebhedi eyodwa kunye nenye enebhedi ephindwe kabini 5p, umntwana ukuya kwiminyaka emi-3 yasimahla (ibhedi) Igumbi lokuhlala elinesofa, itafile yabantu abayi-8 kunye nomabonwakude. Ikhitshi elinezixhobo, igumbi lokuhlambela elineshawa.
I-WiFi yamahhala, igaraji evaliweyo. Indlu eyi-80m, inefenitshala epheleleyo, iTV kunye nendawo yokusebenza. Iibhedi ezilungisiweyo kunye neetawuli zibandakanyiwe. Indawo yokuphumla, ukuhamba, ukuzonwabisa kunye nenkcubeko, imiqolomba, uMlambo waseAsón (iibhafu, i-barbecue ..) I-15 min ukusuka elunxwemeni lwaseLaredo. Umgangatho we-2 kunye ne-ELEVATOR efikelela kwigaraji ngokuthe ngqo. 2 amagumbi (I-1 enebhedi e-DOUBLE enye ibe nebhedi ENYE kunye ne-DOUBLE bed). I-4p kunye ne-baby free (i-cot) Igumbi lokuhlala elinesofa kunye ne-chaise longue, itafile yabantu abayi-8 kunye ne-TV. Ikhitshi elinezixhobo, igumbi lokuhlambela elineshawa.
Indawo ezolileyo kodwa kwangaxeshanye isondele kakhulu kwi-100m kwiindawo zokutyela, iivenkile ezinkulu, iibhanki, icuba, ulwazi kunye nokhenketho ...
Ukuze ube noxolo lwengqondo, ipolisi yokurhoxisa ebhetyebhetye. I-WiFi kunye nendawo yegaraji ibandakanyiwe kwixabiso. Funda uphononongo (iihambo ezifanelekileyo zomsebenzi). 80m, inikwe. Indawo yokuphumla, ukuhamba, ukuzonwabisa kunye nenkcubeko, imiqolomba, uMlambo waseAsón (iibhafu, i-barbecue ..) I-15 min ukusuka elunxwemeni lwaseLaredo. Umgangatho we-2 kunye ne-ELEVATOR efikelela kwigaraji ngokuthe ngqo. 2 amagumbi (I-1 enebhedi e-DOUBLE enye ibe nebhedi ENYE kunye ne-DOUBLE bed) .Max. 4p kunye nosana (ibhedi) Igumbi lokuhlala elinesofa kunye ne-chaise longue, itafile yabantu abayi-8 kunye neTV. Ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo, igumbi lokuhlambela elineshawa.
Ukuze ube noxolo lwengqondo, ipolisi yokurhoxisa ebhetyebhetye. I-WiFi kunye nendawo yegaraji ibandakanyiwe kwixabiso. Funda uphononongo (iihambo ezifanelekileyo zomsebenzi). 80m,…